FOTO-DRAFITR’ASA : Miha-potika isan’andro ny arabe eto andrenivohitra | NewsMada
FOTO-DRAFITR’ASA : Miha-potika isan’andro ny arabe eto andrenivohitra
Mampitaraina ny vahoaka ny faharatsian’ny lalana eto an-drenivohitra.
Ao anatin’ny fotoanan’ny fahavaratra tanteraka isika amin’izao fotoana izao. Mipoitra avokoa araka izany ireo karazan-davaka isan-karazany eny amin’ny arabe eto andrenivohitra. Izay tena mampikaikaika ny ankamaroan’ireo mpampiasa làlana satria isan’ny antony tena miteraka ny fitohanana sy mahatonga fahasimban’ny fiara izany.
« Raha ny tokony ho izy dia ny fanjakana foibe amin’ny alàlan’ny minisiteran’ny asa vaventy no manamboatra ny làlam-pirenena na eto andrenivohitra izany na ireo mampifandray ny faritra fa ny kaominina kosa no manamboatra ireo tsy làlam-pirenena. Na ny làlam-pirenena na tsy làlam-pirenena anefa dia tena efa miha-potika tanteraka amin’izao fotoana izao. Io no vokatry ny fanaovana asa vonjy tavan’andro amin’ny fanamboaran-dàlana », hoy ny nambaran’ny injenera misahana ny fanamboaran-dàlana iray.
Araka ny nambaran’ity manam-pahaizana ity hatrany dia amin’ny fotoanan’ny main-tany no tokony hanaovana ny fanamboaran-dàlana saingy amin’izany fotoana izany dia toa tsy miraika firy ny fitondrana. Raha izao no mitohy dia tsy ho azo ampiasaina intsony ny làlam-pirenena sy ny làlana eto andrenivohitra afaka roa taona.
Mariky ny tsy fandraisan’andraikitry ny fitondram-panjakana araka izany io fahapotehan’ny làlana eto andrenivohitra io, tsy asiana resaka intsony ny any amin’ny faritra hafa. Ny hetra anefa tsy tapaka mihitsy na ny alohan’ny mpampiasa làlana izany na ny avy amin’ireo kaompania mpivarotra solika.